BARNAMJIKI HOGAAN IYO HORUMAR
Tuesday June 11, 2019 - 08:50:34 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Inago Tix galinayna cilmi badhistii asaecenter qaybaha iyo qaabka hogaamiyayaashu waa hab u qofku u isticmalayo awood iyo aqoon xeel dheer si u hogaamiyo umad dhan.
Cilmi baadhistu waxay cadeesay kala duwanan shiyaha hogamiyayaasha iyado hal beeg loga dhigaayo hadaba tirada raacsan hogamihaas o u hogaaminaayo qaabka ugu haboon ee lo kala saarayo waa waa hab shaqeedkoda iyo xaaladooda hogaamineed. Hadaba qaybaha Hogamiyaasha halkan hoose ayaan kugu taxayaaye insha allah:
1. Autocratic Leadership: Hogaamiyahani waxa u udub dhaxaad u yahay dhamaan wax walba awood iyo mas uliyadba waxa una go’amiya wax walba
isaga o aan la tashan cida ay wada tashiga leyihiin.
2. Democratic Leadership: Hogamiyahan nocani ah waxa u ka tacaluqaa samaynta go’aan waliba waxa u la tashtaa cida ay wadagan talada waxa una go’aamiyaa hadii la so jeediyo talo waliba isaga o la tashanaaya cida ay shaqada wadaagan waana hogaamiye wanaagsan waxa anu la gaaryahay
xidhidhka kala dhaxeya shaqalihisa sare iyo kuwa hosaba.
3. Strategic Leadership Style: Hogaamiyaha noocan ahi waxa u ka taculaqaa
baahida hogaamiyed e lo qabo urur midaysan strategic leader kuma xadidna kala saraynta ururkaas.
4.Transformational Leadership: Hogaamiyani Gabi ahaanba waxa u ka taculaqaa bilaabida isbadal ku yimaada urur ama koox dad ah xataa hal shakhsi o ku hawlan isbadal nafeed Transformational leaders waxay dheeri galiyaan dadka kale si lamida iyagu waxay gaadhan isbadal nololeed o dhamaystiran.
5. Team Leadership: Hogaamiyahani waxa u ku tacaluqaa in u abuuro sawir muuqda o ah isbadal koox ku dhisan aragtidooda iyo waliba dheerigalintooda waxaana adag inta badan in u guulaysto.
6. Cross-Cultural Leadership: Qaab hogaaminedkani waxa u ka jiraa meel ay ka jirto kala duwanansha ha habdhaqanka bulshadu badana hogaamiyayasha nocan ahi waxay ka jiraan United States maxaa waxa jira kala duwananshiyaha dabecadaha iyo dhaqanka bulsheed badanana waxay hogamiyayaan Organization ka.
7. Facilitative Leadership: Hogaamiyahani waxa u ka tacaluqaa cabirka iyo so xareenta natiijo dhaqaale ama mid isabdal kumana xidhna xirfad iyo aqoon.
8. Laissez-faire Leadership: Hogaamiyahan noocan ahi waxa u awooda siiya cida la shaqaynaysa isago ka taxadiraya in aan iman wax buuq ah ama is qab qabsi ah .
9. Transactional Leadership: Hogaamiyahan noocan ahi waxa u joogteya ilaaliya xaalka iyo isabdalka waxa u na ka taculaqu isbadal ay si dhakhso ah ay ku helaayan cida raacsan e u hogaaminaayo waxa una abaal mariyaa shaqalihiisa waaana la
kulmaa mar marka qaar.
10: Coaching Leadership: Hogamiyaha noocan ahi waxa u ka tacaluqaa barida so saarista cida la shaqaynesa waxa una dherigaliya o wax baraa cida wax ka dhiganaysa wanu dheeri galiyaa si toos ahna waa ula shaqeeya iyaga.
11. Visionary Leadership: Hogaamiyahan noocan ahi waxa u ka Tacaluqaa aqoonsiga hababka iyo stepska iyo waliba qaabka hogaamiyaha iyo khibradaa u ka helay dadka kale waxayna kaso dherin dheriyaan fekeradooda waxyabaha xaqiiqda ah
e ay nolosha ka heleen.
Finally refer this research in this website
ALLA MAHAD LEH ALLA MAHAD LEH ALLA MAHAD LEH
BY: Mohammed Adam Hassan
Engineer Politician Researcher and writer
Hogaan IYO Horumar.
Q 4AAD Q 4aad Qaybaha Hogaamiyaasha (Mohamed Aden Hassan)
DOORO HOGAAMIYE WANAAGSAN OO HORUMAR KEENI KARA
IYO ISBADAL DUNIDANA INA GAADHSIIN KARA.